I-WOWOW bhuloho ekhishini le-sink mixer - isiteketiso se-brunch
Ikhaya / Ikhishi Faucets / I-Rustic Bridge Ikhishi Lompompi / I-WOWOW Bridge Kitchen Sink Mixer Tap - I-Nickel Ebhulashi
I-WOWOW Bridge Kitchen Sink Mixer Tap - I-Nickel Ebhulashiwe
Isikhiphi siwumkhiqizo wehardware esidinga ukuwusebenzisa nsuku zonke ezimpilweni zethu, esilungele ukusebenzisa amanzi. Phakathi kwazo, isobho lokugeza liwumkhiqizo ovame kakhulu. isitayela sebhuloho lesikhishini sekhishi linesimo esiyingqayizivele, Khetha le empompini ukufeza izidingo zakho zobuhle.
Isikebhe sekilasi lekhishi lokucwila
Nakanjani, isikebhe ekhishini singumkhiqizo wekhompyutha ekhishini oyisebenzisa nsuku zonke. Izikhathi eziningi ngisho. Isikhiphi se-sink echibini sikhangeleka kakhulu ukuthinta amanzi, ukuphuza amanzi, noma ukuhlanza ikhishi lakho. Kungakho ungahle ufune ukukhetha isikulufu sefenisha ekhishini ukuze uvumelane nezifiso zakho ngokunembile. Hhayi kuphela ngokubheka isitayela sakho sasekhishini, kepha nakanjani ngokufanelekile nangokuphathelene nokusebenza nokusebenza kwaso. Ifenisha ekhishini yokubhuloza ekhishini yeWOWOW ikunikeza isikulufu esikhethekile sokuklama ekhishini esifinyelela izifiso zakho zobuhle. Amalunga alo ajwayelekile we-retro aqhakambisa isitayela sezwe laseFrance lasendulo ekhishini lakho. Lokho kwenza ukwakheka kwekhishi lakho kuhlukile. Isiponji eside futhi esigobile sigaxekile sinikeza ikhishi lakho ukuthinta okuhle okudingayo ukukunikeza nge-wow-factor.
Ukuqedwa kwe-nickel okuphelele kunikeza ukubukeka okuhle nokuvunayo ekhishini lakho. Ngokubambisana nomklamo uqobo, nakanjani ungomunye wephethini lokucwilisa ekhishini elinomusa. Abaklami be-WOWOW bayazi ukuthi bangaklama kanjani ama-faisalts asekhishini anesibindi. Ungakubona lokho kukho konke. Amakhishi asekhishini we-WOWOW ahlukile kunoma yisiphi esinye isikebhe ekhishini ekhishini. Abaqambi bayadideka, bazi konke ngamakhishi asekhishini, futhi okubaluleke kakhulu ukuthi abawukeli phansi umthelela wesikebhe sokukhanya ekhishini kunoma yikuphi ukukhishwa kwekhishi. Baqinisekile ukuthi bangawenza umehluko kunoma yikuphi ukwakheka kwekhishi, futhi benza konke okusemandleni ukufeza leyo wow-factor ekhishini lakho.
I-Ergonomic bhuloho ekhishini isikeyisi
Induduzo iyikho konke. Njengoba usebenzisa ibhuloho lekhishi lakho lokucwila izikhathi eziningi ngosuku, udinga umklamo we-ergonomic okulula ukubamba nokulawula. Izibambo zigijima kahle ukuze zilawule ukugeleza kwamanzi kalula nangokucophelela, amanzi ashisayo nabandayo. Ngale ndlela ungaxuba ukushisa kwamanzi okuhamba phambili. Ngaphandle kwalokho, i-spout emide eqondile egobile ibonelela nge-anti-splatter kanye nesipiliyoni samanzi avuzayo esenza ukuthi ikhishi lishone isikebhe kunokuba likhululeke ukusebenzisa.
Ukugeleza kwamanzi kwe-bomba ekhishini lokushiswa kwebhuloho nakho kubushelelezi ngenxa ye-aerator yayo entsha ye-Neoperl ABS. Akugcini lapho lolu cingo lunikezela ngomfutho othile wokugeleza kwamanzi ukuze wonge amanzi. Ungakuthatheli phansi ukuthi ungonga ngaphezulu kuka-50% wamanzi ngale divayisi ethandekayo. Nakanjani uzokuqaphela lokhu kufili lakho lamanzi. Ngakolunye uhlangothi isipiliyoni sakho samanzi sihlala singaguquki. Ngeke uze uqaphele ukuthi usebenzisa amanzi amancane, ikakhulukazi uma umfutho wamanzi uphezulu. Futhi ekugcineni uzoba nomsakazo onzima ukuze ukwazi ukuhlanza izinto kalula ngejethi elinamandla, ngaphandle kwemodi yamanzi oyisebenzisayo. Ungasusa kalula i-aerator ye-ABS ngaphandle kwamathuluzi ukuze uyisuse ukuze uyihlanze noma uyisuse esikhundleni sayo. Yazi ukuhlanza i-aerator njalo njengoba izinsalela zamanzi ezinzima zihlangana lapha. Awudingi ngisho nokususa i-aerator uqobo ukuze uyihlanze njalo. Ngokuswayipha okusheshayo ngomunwe wakho, ungasusa konke okushiye kanzima ngokulula nangokulula.
Isikebhe esikhulu ekhishini lokushiswa ekhishini
Isikhiphi se-bark ekhishini sakhiwe kusuka kubhedu olungamelana kakhulu nokugqwala futhi simelana nokushisa okuphezulu kahle. Ngenxa yalokho isikebhe sokuchofoza ekhishini lwebhulogi senzelwe ukuhlala iminyaka eminingi. Hhayi izixhumi ze-ekhishini zasekhishini kuphela ezenziwe ngethusi eliqinile. Futhi ukuxhumana kwe-½ intshi NPS kwenziwa ngethusi eliqinile eliphakeme. Uyakubona lapho ubamba leli faucet ekhishini lokubhubhisa usezandleni zakho. Ngenxa yesisindo sayo ungasho ngokushesha ukuthi izinto zokwakha azilondolozwanga ukukunikeza inani elingcono kakhulu lemali ongayithola.
Indawo engaphezulu ye-nickel ayinikezi kuphela isikebhe sakho sokucwilisa ekhishini kuphela, kodwa futhi ivikela nesikebhe sakho sokushona ekhishini. Ngenxa yokuqedwa kwekhwalithi, ikunikeza okuhlangenwe nakho okungelona kokuluka nokungasebenzi. Isikebhe sakho esilinganisa ikhishi lakho asisengozini yokuqhekeka, futhi singagcinwa sesimweni esihle isikhathi eside. Isiphetho esingaphezulu kwe-nickel surface sikunikeza nezinzuzo zokuthi amaphrinta weminwe awahlali ekhishini faucet ekhishini. Uzoba nesikebhe esihle sokushibilika ekhishini se-sun ekhishini ngaso sonke isikhathi.
Isikebhe sekhibhodi yasendulo ekhishini
Isikebhe sebhishi ekhishini se-WOWOW sibukeka njengephekwe yasekhishini yakudala. Akusizi ngalutho ukuthi kufakwa isikebhe sekhethini lekhishini lokufaka ezindaweni eziningi zentengiso kanye nezindawo zokudlela ezinhle. Isikebhe esenziwe ngebhuloho ekhishini sakhiwa ukuze sifanekise ubuhle bokuqala kwekhulu lama-20. Isikebhe sebhuloho ekhishini lokubhidliza linikeza ukufiphaza okukhazimulayo kobukhazikhazi obukhonjwe ngesiko ekhishini lakho. Ukuphakama kwefenisha ekhishini lokubhubhisa ekhishini cishe kungamasentimitha ayi-8. Le silhouette ende ende egobile ibambe iqhaza elikhulu ekwakhiweni kwayo. Iwarucet ekhishini yewaranti yewaranti ikhwalithi yeWOWOW ayithinteki. Ngenxa yokusebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zethusi kanye nokuqedwa okuhle, ithiphu ekhishini lebhuloho lihlala isikhathi eside. Ngokubambisana nezindlela ezintsha zokukhiqiza izikebhe zasekhishini, i-WOWOW iyakwazi ukugcina izindleko ziphansi ngangokunokwenzeka. Ngenxa yalokho, i-WOWOW ingakunikeza inani elihle kakhulu lemali. Siyaqiniseka ngesilinganiso sethu senani lentengo futhi singakunikeza isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90. Uma ungathola ithiphu elingcono ngentengo efanayo, noma isikulufu esilinganayo sekhishini ngentengo encane, sizokubuyisela ngokugcwele. Ngaphandle kwemibuzo ebuziwe, futhi ngaphandle kokuhlupheka. Siyazethemba kumkhiqizo wethu futhi siyaqiniseka ukuthi nawe uzokwazi.
Njengawo wonke amakhishi asekhishini we-WOWOW, uqinisekiswa isikhathi eside sewaranti esingaphansi kweminyaka engu-5. I-WOWOW idlula wonke amazinga embonini, futhi yenza kanjalo nangokuhambisana nesikhathi sayo sewaranti. Siqinisekisa isikebhe sokucwilisa esisebenza kahle ekhishini iminyaka emi-5. Akudingeki ukuthi uthwale ubungozi, kodwa sizokwenza. Uma ifenisha ekhishini lakho ebhulohweni lenza umonakalo ngalesi sikhathi, siyokujabulela ukuyifaka esikhundleni esisha ngaphandle kokuhlupheka. Lesi siqinisekiso ukuzinikela kwethu kuwe.
Izinzuzo zekhishi lokugezela ekhishini lebhuloho ngamafuphi:
• Ukubukeka kwe-retro ehlukile
• Idizayini ende ende ye-arc
• Kwenziwe ngezinto zethusi ezisezingeni eliphakeme
• Ukuphelela kwe-nickel enhle kakhulu
I-SKU: 2311501 Categories: Ikhishi Faucets, I-Rustic Bridge Ikhishi Lompompi Tags: bridge, I-Nickel ehlutshiwe, I-single Lever
18 x 9 x amasentimitha angu-9
Ngaphandle kwe-sprayer eseceleni